March 2012 – Everybody Read TChen
ရောင်းမယ့် ပစ္စည်းတွေက …..
but barely used it as it’s justabackup camera. (selling for 15,000 THB. slight negotiable)
2. Canon lens EF 75-300 mm f/4-5.6 USM III ( It’s brand new and has been purchased in the states, but never used. Selling for THB 8500/- slight negotiable)
i’m selling this with an extra toner cartridge(worth 2000 for free) foratotal of THB 7,500/- not negotiable
4. Brand new Illy coffee machine (black color). It’s an espresso machine which i received asagift. Comes with one box of illy coffee cubes. Selling for THB 15,000/- not negotiable
Posted on March 27, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကြေညာချက်များ18 Comments on ဟောဒီက ယူကြဦးမလား………..
မြန်မာပြည်ပေါက် ဂေးတယောက်ရဲ့ ဘဝဖြစ်စဉ်တွေ ကို သိချင်သလား
သူ့ဘဝ ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်လာရသလဲ ဘာတွေ ကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲ
သူ့ဘဝ ရဲ့ အပျော်တွေ ရင်မောမူ ဘဝအမော တွေ ကို သူနဲ့ တူတူ ခံစားကြည့်ချင်ရင်
တီ့ သူငယ်ချင်း ဘလောခ်ရေးသူ တဦးပါ
Posted on March 27, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကြေညာချက်များLeaveacomment on မြန်မာဂေးတယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်
တခါတုံးက တရုတ်ပြည်မှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတခု ဘတ်ဖူးပါတယ်။ ကောင်မလေး တယောက်က သူ့ အရင် ကောင်လေးကို ဖြတ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ကောင်လေးက “သွေး” (ဟုတ်ကဲ့ Blood ပါ) နဲ့ စာတစောင်ရေးပေး ပါသတဲ့။ (တော်သေးတာပေါ့ ကို်ယ်တွေ မြန်မာတွေက ဟိုးရှေးရှေးတုံးကလဲ ကညစ် တို့ ပေလွှာတို့ နဲ့ ရေးခဲ့သလို နောက်ပိုင်းလဲ ကျောက်တံ ဘောပင် ခဲတံ စတာတွေနဲ့ ပဲရေးကြတာကိုး တရုတ်တွေသာ စုတ်တံတွေဘာတွေနဲ့ ရေးတော့ ဒီလို ကိစ္စတွေ ရှိတာပေါ့) ကောင်မလေးကတော့ အဲ့လို သွေးနဲ့စာ လက်ခံရတာကြောင့် သနားချစ်နဲ့ ဆက်မချစ်ခဲ့ပါဘူး။ စာပေါ်က သွေးတွေက တကယ့် သွေးအစစ်ကော ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား လို့တော့ သံသယ ဝင်လိုက်ပါသေးသတဲ့။
မိန်းမတယောက်အတွက်များ သွေးနဲ့ စာရေးပေးတဲ့ ယောက်ျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါ မျိုး လက်စသတ်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိကိုရှိနေသေးတာကိုး။ သွေး (သေးဟု မှားမဘတ်ပါရန်) ထွက်အောင် ချစ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ်အရင် က figure of speech စကားအဖြစ်ပြောတယ်ပဲ မှတ်တာ။ သွေးနဲ့ ရေးပေးတဲ့ စာလက်ခံရရှိတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကိုလဲ ကိုယ်မသိနိုင် ပါဘူး။ နားလဲမလည်နိုင်ဘူး။ ဂုဏ်ယူမိမလား? ထိခိုက်ခံစားရမလား? ဒါမှမဟုတ် ကြောက်သွား မလား? (ဆိုက်ကိုကောင်နဲ့ တော့ ခက်နေပြီဆိုပြီးလေ) ဒါပေမယ့် သေချာတာတခုကတော့ ကိုယ့်ကိုသာ အဲ့လို
ယောက်ျား တယောက်က သွေးနဲ့ စာရေးပေးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကတော့ အဲ့ဒီ ကောင်ကို တော်တော် အထင်သေး မိမယ်။
ယောက်ျားတွေ ရဲ့ သွေးဆိုတာ နိုင်ငံအတွက်ကျရမှာ မှလား၊ သူ့တို့ မိသားစုအတွက် သူတို့ ချစ်တဲ့ ဇနီးမယား
အတွက်၊ သားသမီးတွေအတွက် ကျရမှာလေ။ ယောက်ျားတွေရဲ့ သွေးဆိုတာ ခံနိုင်ရည်ရှိရမှာ ပျော့ညံ့ဖို့ မှမဟုတ် ပဲ။ မိန်းမကို ရိုက်လို့ နာကျင်ပြီး ထွက်တဲ့ သွေးနဲ့ အန္တရာယ်ကြားက မိန်းမ ကို သက်စွန့်ဆံဖျား ကယ်လို့ထွက်တဲ့
သွေး ဆိုတာက မတူညီတဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ခြားနားပြီး ထွက်တဲ့ သွေးတွေပါ။ ပထမတခုက နိုင့်ထက်စီးနင်းမှု နဲ့ ရိုင်းဆိုင်း ကြမ်းတမ်းမှု ဖြစ်ပြီးတော့ ဒုတိယတခုက လေးနက်တဲ့ အချစ် နဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေကိုပြတယ်။
တခါတုံးကလဲ အသက် ၃၀ ကျော်ယောက်ျားတယောက်က သူ့ချစ်သူ မိန်းကလေး ရှေ့မှာ သူ့လက်ကို သူ မီးခြစ်နဲ့ ရှို့ ပြတာ၊ လက်ဖမိုးကို ဓါးနဲ့ လှီးပြတာ ကြည့်ရဖူးတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ပြနေတဲ့ အချိန်မှာလဲ သူ့မျက်နှာက နာကျင်မှု နဲ့ မဲ့ပြုံးနဲ့။ အဲ့တာ အချစ်မဟုတ်ဘူး။ အဲ့တာ ခြိမ်းခြောက်မှု တခု သက်သက်ပဲလို့ ကိုယ်ချက်ချင်းပဲ နှစ်ယောက်လုံးရှေ့ မှာပြောချလိုက်မိတယ်။ မိန်းမတယောက် (ချစ်သူပဲ ဖြစ်ပါစေ) အတွက် ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ်မီးနဲ့ ရှို့ ပြ ဓါးနဲ့လှီးပြရဲ တဲ့ယောက်ျားတယောက်က ဘဝမှာ ဘယ်လိုမျိုး ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုတွေသယ်ဆောင်လာနိုင်မှာမို့လို့လဲ?
ဥပမာ သေဘေးဒုက္ခနဲ့ တကယ် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ သူ့ချစ်သူ မိန်းကလေး ကိုကာကွယ်နိုင် စွမ်း သူ့မှာ တကယ်ရှိပါ့မလား လို့ကိုယ်တွေးမိတယ်။ ဒီလို လုပ်ပြရဲတာ အချစ်မဟုတ်စလို သတ္တိရှိတာလဲ မဟုတ် ပါဘူး။ ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရင် အဲ့တာ မိုက်ရူးရဲ သာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ခက်တာက မြန်မာ ရုပ်ရှင် (ဗီဒီယုို) တော်တော်များများ ကလဲ အဲ့လိုမျိုးနှင်နှင်တွေ ရိုက်ပြနေတာ ရူးရူးမိုက်မိုက် ချစ်တာ ကိုပြချင်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီ စကားလုံးကိုပဲ နှစ်ခြမ်း ခွဲပြီး ရူးတာနဲ့ မိုက်တာကို ပြချင်တာလားလို့ တွေးမိတယ်။ ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ လက်ကို ဓါးနဲ့လှီးပြတာ မီးနဲ့ ရှို့ ပြတာ ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သတ္တိရှိတာလဲ မဟုတ်ဘူး အဲ့တာ ရူးနမ်းတာ သက်သက်၊ အဓိပ္ဗါယ်မရှိတာ သက်သက်ပါ။ နောက် ယူပြီးတော့ မိန်းမ ကို ရိုက်နက်တတ်တာလဲ အဲ့လိုယောက်ျားတွေ များပါတယ်။
နောက်ပြောစရာတခုက ယောက်ျားတွေ ရဲ့ သွေးနဲ့ မိန်းမတွေ ရဲ့ မျက်ရည် ဆိုတာကလဲ နှိုင်းယှဉ်ပြောလို့ မရတဲ့ အရာနှစ်ခုပါပဲ။ မိန်းမတယောက်ရဲ့ မျက်ရည်ကလဲ တကယ့်တကယ်မှာ ကိုယ့်ကိုထားသွားမယ့် (မချစ်တော့တဲ့)
ယောက်ျား တယောက် တားထားနိုင်မယ့် လက်နက်မဟုတ်သလို။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ သွေးဆိုတာကျတော့ လဲ မိန်းမ ကို မြန်မြန်ဝေးဝေးပြေးစေမယ့် ခြိမ်းခြောက်မှု တခုသာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ (ပိုဆိုးတဲ့ အခြေအနေ ဆိုရင် ကိုယ့် ကို အရူးကောင်လို့ ရွံ့ကြောက်ကြီးတောင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်)
သွေးနဲ့ စာရေးပေးခဲ့ဘူးတယ် ဆိုတာ တကယ့်တော့ တွေးကြည့်ရင် ကောင်လေးအတွက်လဲ နောင်အခါမှာ သူ့အချစ်ဇာတ်လမ်းရဲ့ သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ ဇာတ်ကွက်တခု မဖြစ်ဘဲ ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရင် ပြန်တွေးတိုင်း ရှက်ရှက် နဲ့ ပြုံးရယ်ရမယ့် ရယ်စရာ ငပေါကွက် တခုသာ ဖြစ်ခဲ့မှာပါပဲ။
ခက်တာကလဲ သတ္တိရှိတယ် ဆိုတာနဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်တယ်ဆိုတာကို ယောက်ျားတော်တော်များများကလဲ မကွဲကြဘူးကိုး။ အချစ်အတွက် သက်သေပြချင်တဲ့ စိတ်နဲ့သာ မဖြစ်နိုင်တာတွေ လျောက်ပြောတာလဲ ယောက်ျား
တွေပါပဲ။ မိန်းမတွေက အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးတွေမှာ ယောက်ျားတွေ ထက်ခေါင်းပိုသုံးတယ်ဆိုတာလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြင့်မြတ်တယ်လို့ ထင်ယောင်မှားနေတဲ့ ယောက်ျားတွေ အီးပိတ်ပိတ်နဲ့ လက်ခံနေရတာပါပဲ။
Posted on March 25, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး2 Comments on သွေးထွက်လောက်အောင် ချစ်သတဲ့လား
စိတ်ဝင်စားစရာတွေဘတ်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီကို သွားပါ
Posted on March 25, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကြေညာချက်များ2 Comments on ကြော်ငြာ
ယောက်ျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါဆိုတာ အိမ်မှာ ဖုန်းမြည်တဲ့အခါ ……အသံပြဲကြီးနဲ့ “ဖုန်း” လို့ ထထအော်တတ်ပေမယ့် ဘယ်သောအခါကမှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ထပြီးတော့ အဲ့ဒီ မြည်နေတဲ့ ဖုန်းဆိုတာကြီးကို မြည်သံရပ်သွားအောင် ထမကိုင်တတ်ပါဘူး။
ယောက်ျားတယောက်ဆိုရင် ဧည့်ခန်းကနေ ရေချိုးခန်းထဲက ရေချိုးကန်ထဲမှာ စိမ်နေတဲ့ မိန်းမဖြစ်သူဆီအပြေးသွား
ပြီးတော့ “ဖုန်းလာနေတယ်” လို့ပြောပါတယ်။ မိန်းမက “ဘယ်သူ့ဆီကလဲ” လို့ပြန်မေးတော့….ပျင်းတိပျင်းတွဲ နဲ့ ….“ဘယ်သိမှာလဲ ငါမှ မကိုင်ကြည့်တာ” လို့ ပြန်ဖြေပါသတဲ့။
တယောက်ယောက်ကများ အိမ်ရှေ့မှာ တံခါးခေါက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ အဲ့ဒီ ယောက်ျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါက အသံပြဲ နဲ့ “အိမ်ရှေ့မှာ တံခါးခေါက်နေတယ်” လို့အော်ပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် သူနဲ့မဆိုင်သလိုပဲ မိန်းမ ထဖွင့်တာကို တီဗီကြည့်မပျက်ဘဲ ထိုင်စောင့်နေတာလဲ သူတို့ပါပဲ။
ယောက်ျားတွေ က သူတို့ မိန်းမတွေကို အမြဲလိုလိုမေးလေ့ရှိတဲ့ မေခွန်း ၃ ခုရှိပါတယ်။
ယောက်ျားတွေ အမြဲ လိုလိုပြောလေ့ရှိတဲ့ (အပြောအများဆုံး) စကားတခွန်းကတော့….
“မိန်းမရေ ကိုယ်ဒီနေ့လဲ နောက်ကျအုံးမယ်နော် ညစာစားမစောင့်နဲ့တော့။”
(အိုဗာတိုင်ရှိလို့၊ သူငယ်ချင်း ထမင်းကျွေးပွဲရှိလို့၊ ရုံးမှာ ညစာစားပွဲရှိလို့…..စသဖြင့်ပေါ့လေ အကြောင်းပြချက်တွေ သာပြောင်းမယ် ပြောချင်တာကတော့ တူတူပါပဲ)
လင်မယားနှစ်ယောက် တူတူတနေရာရာ ကို ကားမောင်းသွားလို့ လမ်းမှာ မတော်တဆ လမ်းမှားနေပြီဆိုပါစို့…..
ယောက်ျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါတွေဟာ ဘယ်တော့မှ သူတို့ ကားမောင်းရင်း လမ်းမှားနေပြီ ဆိုတာ ဝန်မခံတတ်ပါဘူး။ “ငါ လမ်းမမှားဘူးကွ၊ ဒီနေရာက လမ်းမှတ်တိုင်တွေက တလွဲတွေ ပြထားတာ” လို့ ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အချိန်မှာများ မိန်းမ က အလိုက်မသိစွာနဲ့ “ရှင် လမ်းမှားနေတာ အသိသာကြီးကို” လို့များ ပြောမိလို့ကတော့ “အဲ့တာလဲ မင်းသောက်တလွဲတွေ လမ်းပြနေလို့ပဲ ဖြစ်ရတာ၊ မဟုတ်ရင် ငါဘယ်လိုလုပ် လမ်းမှားမှာလဲ” လို့ ကားမောင်းနေတာသူဖြစ်ရက်နဲ့ ဘူးခံငြင်းပြီး အပြစ်တောင် ကိုယ့်ဘက် ပြန်လွှဲလာတတ်တာလဲ အဲ့ဒီ ယောက်ျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါပါပဲ။
ကိုယ်တွေက အလှပြုပြင်ဆိုင်မှာ နေ့တဝက်လောက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရတဲ့ ရက်ချိန်းလေးနဲ့ အချိန်ကုန်ခံ ပြီး ဆံပင် ကိုပြုပြင်ထားတယ်ဆိုပါတော့…..အိမ်ပြန်လာတဲ့ အခါမှာ အသစ် ဖြောင့်ထား၊ ကောက်ထားတဲ့ ဆံပင်လှလှလေးနဲ့ ကိုယ့်ယောက်ျားက ကိုယ့်ကို “ဟာ……ငါ့ မိန်းမ ဒီနေ့ တယ်လှနေပါလား” လို့ ချီးမွမ်းတာ ခံချင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ “ယောက်ျားရေ လှရဲ့လား” လို့ မေးတဲ့အခါ “ဟမ် နေ့တဝက်ကျိုးလောက် အချိန်ကုန်ခံပြီး ထွက်လာတော့လဲ ဒီပုံပါပဲလား” လို့ အလိုက်မသိစွာ ပြန်ဖြေတတ်တာလဲ ဘယ်သူလဲ ပရိတ်သတ်ကြီး……. (ယောက်ျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါတွေပါပဲ။)
ယောက်ျားဆိုတာ အဲ့လောက်ကို မုန်းဖို့ ချဉ်ဖုို့ ကောင်းတဲ့ သတ္တဝါတွေပါပဲ။ ဘာလို့များ ယောက်ျားတယောက်ကို ကိုယ့်နဲ့တူတူဘဝလက်တွဲဖို့ ကိုယ့် ယောက်ျား ဖြစ်လာဖို့ လက်ခံခဲ့တဲ့အချိန်တုံးက ဘာလို့များ အဲ့လောက် ပျော်ရွှင် ချိုမြိန်ခဲ့တာပါလဲနော်။
ကဲ ပြောစရာရှိတာတွေကတော့ ပြောပြီးပြီ တော်သေးတာတခုက ကိုယ့်မောင် က အဲ့လို ယောက်ျားတွေထဲမှာ မပါ ပေလို့ပေါ့။ ကိုယ့်မောင်က ဖုန်းဆိုရင် အရင်ကောက်ကိုင်ပြီးသား၊ တံခါးဆိုရင်လဲ ဖွင့်ပြီးသား၊ မောင်ရေ ဒီနေ့ ရုံးမှာ ပင်ပန်းလိုက်တာလို့ ပြောရင် မောင်နှိပ်ပေးမယ်လေ သဲဆိုတာမျိုး၊ ကိုယ်က မောင်ရေ မောလာတယ်ကွယ် လို့ ပြောလိုက်ရင် သံပရာရည်အသင့်ဆိုတာမျိုး…..ဒီကင်မရာ လန်းစ်လေး လိုချင်လိုက်တာ ဝယ်ပေးမလားဟင် ဆိုရင်လဲ သဘောသဘော ဆိုတာသူပဲ။ ကဲ ကိုယ့်လို ကံမကောင်းချင်ကြဘူးလား။
Posted on March 24, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး10 Comments on ယောက်ျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါ
နောက်တော့လဲသူမ မသေပါဘူး။ ကောင်လေးကလဲသူမ အနားကို ပြန်မလာပါဘူး။ ကိုယ်ထင်တာက ဒီလုိုတွေ ဖြစ်ပျက်ပြီးမှတော့ သူမ နောင်တ ရမယ်ထင်တာ။ ဒါပေမယ့် သူမက ဘာပြောသလဲဆိုတော့….
Posted on March 21, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး7 Comments on အချစ်အတွက် အသက်စွန့်မယ့်သူ
စစ်ထဲမှာ က ဒီလိုကိစ္စတွေမထူးဘူးဆိုပေမယ့် ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ ကြေကွဲစရာပါ။ နောက် ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာတွေ ရှိတယ် မင်းသမီး ပြင်သစ်ရောက်တော့ ဆန့်ကျင်ရေးသမား ကွန်မြူနစ်ရဲ့ အဖေ ပြောတဲ့ စကားတခွန်း…..မင်းသမီးကို ဘာ့ကြောင့် ဒီကိုလာရတာလဲ မေးတော့ မင်းသမီးက နိုင်ငံအတွက်ပေါ့လို့ပြန်ဖြေတယ်။ အဲ့မှာ အဖိုးအို ပြန်ပြောတာက “ဘယ်သူမှ သူတို့ နိုင်ငံအတွက် စစ်မတိုက်ဘူး၊ သူတို့ မိသားစု အတွက် သူတို့ချစ်တဲ့ သူတွေအတွက် စစ်တိုက်ထွက်ကြတာ” တဲ့။ ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်သလဲ။ ယုံကြည်မှု ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ မင်းသမီးက ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး ကိတ်ဘလန့်ရှက်ပါ။
Posted on March 20, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး9 Comments on ပြန်မရတော့မယ့် မနေ့ည…
ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင် လာဗင်းဒါး (Lavender) ဆိုတာကြည့်ဘူးပါသလား။ လာဗင်ဒါး ဆိုတာ ရေမွှေးပန်းကိုခေါ်တာပါ။ ခရမ်းရောင်လေးတွေရှိတယ် ဥရောပဘက်မှာ ပေါက်တယ် ခရမ်းရောင်ပန်းခင်းကြီး တခုလုံး လမ်းကြား ညီညီလေးတွေနဲ့ တွေးကြည့်စမ်းပါ ဘယ်လောက်များ ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးစရာကောင်းလုိုက်မလဲလို့ အဲ့လို ပန်းခင်း ခရမ်းရောင်ပေါ်မှာ နတ်သားတပါး ပျံ နေမယ်လို့ မြင်ရောင်ကြည်စမ်း။ ဘေးမှာတော့ ရထားတစင်းပြေးနေတယ် ရထားပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးက မနက်စာ စားပွဲပေါ်မှာ ငိုနေတယ်။ မျက်ရည်တွေက ရေခွက်ထဲကို တစက်စက်ကျလို့ ရေတွေတောင် လျှံကျလာတဲ့အထိပဲ။ အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်ကို ကဗျာ တပုဒ် ရေးဖူးပါတယ်။ ဒီမှာ ဘတ်ပါ။
ရုပ်ရှင်က မင်းသမီး/အဆိုတော် Kelly Chen ။ ဟောင်ကောင် အဆိုတော် Eson Chen နဲ့ မင်းသား Takeshi kaneshiro ဂျပန် တရုတ်စပ်မင်းသား တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပါ။
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းက ဒီလိုပါ။ မင်းသမီးက အရိုမား သရပစ် လို့ခေါ်တဲ့ ရနံ့ ကုထုံး ပညာရှင် ချစ်သူသေသွားတာ မကြာသေးလို့ အသည်းကွဲနေတယ်၊ မင်းသမီးရဲ့ အိမ်နီးနားချင်း ဂေး အဖြစ် အီစန်ချမ်း က သရုပ်ဆောင်ထားတာ။ တနေ့တော့ မင်းသမီး ရဲ့ တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်ကို နတ်သားတပါး (တာကရှိ) ပြုတ်ကျလာတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ်တို့လဲ သူသူကိုယ်ကိုယ် နတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ် နတ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အိမ် ဘယ်ကိုနီ ပေါ်ကို ပြုတ်ကျစေချင် ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လေ ရတာမလို လိုတာမရတဲ့ ဂျဇူး (ဂျဇူး ဆိုတာ ဘာကိုပြောချင်တာလဲ လို့ သိချင်သူများ John Carter of MARS ကိုကြည့်ကြကုန်) လောက မှလား။ အဲ့ဒီ နတ်သားက လူ့ပြည်မှာ အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် အချစ်လိုတယ်။ တခါတခါ ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိစပ်တဲ့ အချစ်နဲ့ အသက်ဆက်လို့ ရပေမယ့် တကယ်က အချစ်စစ် လိုတယ် အငွေ့ဖြစ်စေ အချစ် စစ်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသမီးက အရင်ရည်းစား အန္ဒရူး ကို သတိရနေတုံးပဲ။ တမ်းတနေတုံးပဲ။ အိန်ဂျယ်နဲ့ တောင်ရှေ့မဆက်နိုင်ဘူး။ ကြားထဲမှာ အရင် အန္ဒရူး တုံးကလဲအသေအလဲ လိုက်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ အိမ်နီးနားချင်း ဂေးမမ ကလဲအိန်ဂျယ်ကို အသေရရ အရှင် ရရ။ မင်းသမီး အသီနာ ကလဲ အိန်ဂျယ်ကို ချစ်မလာ အိန်ဂျယ်က လဲအချစ်စစ် ကိုလိုအပ်နေကျန်တာကိုတော့ ငွေရောင်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာသာ ရှုပေတော့……..
ကိုယ်ကတော့ ဖိနပ်တွေကို သီချင်းဖွင့်ပြီး အိန်ဂျယ်က ကစေတဲ့ အခန်း၊ အသီနာ အိန်ဂျယ် ကိုချစ်မိဖို့ အတွက် သူ့နတ်ပြည်က သူငယ်ချင်းတွေက လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီး ကူတဲ့အခန်း မင်းသမီး လမ်းလျောက်တာကို တီလုံးနောက်ခံနဲ့ ရိုက်ပြတဲ့ အခန်း နောက် ဥရောပမှာ လာဗင်းဒါး ပန်းခင်းဘေးမှာ ရထားပေါ်ကနေ မင်းသား ခုန်ချ အတောင်ပံဖြန့် ပျံတဲ့ အခန်း တွေ ကို ကိုယ်သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။
ရီဗျူး ဘတ်ချင်သူတွေ အတွက်က ဒီမှာ သင့်ရဲ့ ပြွန်ကနေ ကြည့်ချင်သူတွေ အတွက်က ဒီမှာ တရုတ်ဝီကီ ကနေကြည့်ချင်သူတွေ အတွက်က ဒီမှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်သူတွေ အတွက်က ဒီမှာ ရှာကြည့်ကြကုန်။
ကဲ တီချမ်း တို့ ထုံးစံအတိုင်း မလိုအပ်တာတွေ လျှာရှည်နေလိုက်တာ ရုပ်ရှင်ရီဗျူး ဖြစ်နေပြီ။ တကယ်ရေးချင်တာက ခုမှလာမှာ……..ရုပ်ရှင် ထဲမှာ အခန်းတခန်း ပါတယ်။ အိန်ဂျယ်က သူနေလာခဲ့တဲ့
ကောင်းကင်ဘုံကို လွမ်းလို့ ရနံ့ ပညာရှင် မင်းသမီးကို ကောင်းကင်ဘုံ ရဲ့ ရနံ့ ဖော်စပ် ခိုင်းတာ။ ယီလိင် ယီလိင် ဆိုတဲ့ ရနံ့ တမျိုး ပါတာ ကိုယ် နာမည်ကြောင့် မှတ်မိနေတယ်။
ခုမှ ပိုစ့်က စမယ်။ ခုနက ခြေဆင်း။ ကိုယ် ဘတ်ဖူးတာနဲ့ ကိုယ်တွေးမိတာလေးတွေ ဆက်စပ်ပြီး ပြောချင်တာ။
အင်္ဂလိပ်နဲ့အမေရိကန် သိပ္ဗံပညာရှင် (လောကဓါတ် ပညာရှင် လို့ ခေါ်ရတာကို ပိုကြိုက်တယ်) တွေရဲ့ လေ့လာမှု
တွေ့ရှိချက်တွေအရ ရနံ့တွေက လူတွေ ရဲ့ မှတ်ဥာဏ် မန်မိုရီ ကို လှုံ့ဆော်ပေးတယ် ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်တို့ဦးနှောက် ထဲမှာ ရနံ့ ကို သိမှတ်တဲ့ ပွိုင့် နဲ့ မန်မိုရီ ကိုတာဝန်ယူတဲ့ ပွိုင့် တွေက နီးနီးလေးမှ တကယ့်နီးနီးလေးပဲ လို့ဆိုပါတယ်
အဲ့ဒီအဆိုကိုယ် ကိုယ်က လုံးဝ ဥသုံ ဘုတ်ဆုံ လိုထောက်ခံပါတယ်။ ရှင်းပြမယ်။ ကိုယ်တို့တွေ ဖြစ်ဖူးကြတာ တခုရှိတယ်။ အများစု အတွက် မပြောဘူး ကိုယ့်တသီးပုဂ္ဂလ ပဲ ပြောမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေ မိဘ မောင်နှမ သားချင်းတွေ ရဲ့ အီးနံ့ ကို ကိုယ်မှတ်မိနေတယ်။ တယောက်ယောက် ပေါက်ရင် အဲ့တာ သူပဲ လို့ ကိုယ့်မှတ်ဥာဏ်က တခါ ရှုဖူးရင် မှတ်မိနေတယ်။ အမြဲမှန်တယ် ကြိုက်သလောက် ငြင်း ပြီးရင် ဝန်ခံရမယ်။
နေအုံး အဲ့ဒီ ဥပမာ က သိပ် ရိုမန်မတစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တမျိုး ပြောင်းပေးမယ်နော်။
ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ အနံ့ တခုခု ကိုရလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ နေရာ တခုခု ကို သတိပြန်ရတာ။ ပိုလွယ်တဲ့ ဥပမာက မုန့် အနံ့ တခုခု ကို ရလိုက်တဲ့ အခါ ငယ်ငယ်က ဘဝလေးကို ပြန်ပြောင်း သတိရတာ။ မိုးရွာလို့ မြေသင်းနံ့ လေးရရင် ချစ်သူနဲ့ တူတူ လည်ဖူးတဲ့ မြေနီလမ်းကြားလေးကို သတိရတာ။ အကောင်ပုပ်နံ့ ရရင် ကိုယ်သတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူသေ အလောင်းကောင် မြုပ်တဲ့ ည ကိုပြန်သတိရတာ (အလကားစတာ) စသဖြင့်ပေါ့။
ကိုယ်ကတော့ အနံ့ အာရုံ အရမ်းကောင်းတဲ့ အထဲမှာ မပါဘူး။ အနံ့ နဲ့ နေရာတွေ ကို မတွဲ မိတတ်ဘူး။ ဥပမာ အနံ့ တခု ကိုရတာနဲ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်နေရာ ဆိုတာမျိုး ကိုယ့်မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ ပေါ်လာလေ့မရှိဘူး။ အနံ့ နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ကိုယ့်မှတ်ဥာဏ် နဲ့ ကိုယ် ဆက်စပ် တွဲမိ သတိရ တတ်တာက လူပဲ။ ဟုတ်တယ် မောင့် ကိုယ့်နံ့ ကိုစွဲနေတတ်ပါတယ်။
လူတိုင်းရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ သူ့တယောက်စာ ရနံ့ တမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတတ်ဘူး။ လူတယောက်နဲ့တူတူနေတာ ကြာလာတဲ့ အခါ အဲ့ဒီ လူရဲ့ ကိုယ်နံ့ကို မှတ်မိလာတတ်ပါတယ်။ စွဲလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့ ရနံ့ ကို ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ လို့ ခွဲခြားပြောပြတတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့အနံ့ကို ကိုယ်ပဲ သိတယ်။ တခြား ဘယ်သူ့ဆီမှာ မှ မရှိသလို ရလဲ မရဘူးဘူး ကိုယ့်ချစ်သူ တယောက်ထဲမှာ ပဲ ရှိတယ်။ တချို့တွေ ပြောကြတယ် သစ်တော်သီး ရနံ့ လေးသင်းနေတယ် ဘာညာလေ အဲ့တာ ညာတာ။ ဘယ်လိုပြောမလဲ ကိုယ်ထင်တယ် ချိုအီ တာကို တင်စား ပြောချင်တာ ဖြစ်မယ် နည်းနည်း သက်ညှာပေးလိုက်တယ်။
တခါတခါ မောင့်ကို အရမ်းချစ်စနိူး ဖြစ်လာရင် မောင့် လည်တိုင်လေးကို ကပ်ပြီးတော့ မောင့် ကိုယ်နံ့လေးကို ကိုယ် ခိုးနမ်းတတ်ပါတယ်။ (အရင် ရည်းစားတွေ ကော အနံ့မမှတ်မိဘူးလားဆိုတော့ မောင့်လောက် ချစ်ခဲ့တာ တယောက်မှ မရှိလို့ပေါ့) မိုက်တယ်နော် တီချမ်း တို့ က အကာနဲ့ အပင့်နဲ့ဟပ်နေတာပဲ။ တခါတခါလဲ မောင့်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေး ဖက်ပြီးတော့ မောင့် ကိုယ်နံ့ကို ခပ်ပြင်းပြင်း �